Waxaan Jeclaan Lahaa Suuqleyda Inay Joojiyaan Hadalkaan ... | Martech Zone
Jenn iyo waxaan booqannay xarunta Hiddaha Toddobaadkan oo ay fadhiisteen kooxdooda suuqgeynta dijitaalka ah mid ka mid ah su'aalaha soo kordhayna waxay ahayd haddii aan waligood dhigno macluumaad ka dambeeya diiwaangelinta. Waxaan si deg deg ah uga jawaabnay inaanan waligaa horay u sameynin. Kooxda isdhexgalka waxay yiraahdeen waxay tijaabiyeen labadoodaba a warqad cad iyo infographic iyo 0% ayaa diiwaangashan oo soo dejiyey warqadda cad oo 100% la diiwaangeliyey si loo arko infographic.
Runtii waan jeclahay marka aan la kulanno kooxaha ka hor taga xaalada taagan oo aan tijaabino wax sidan oo kale ah. Aad ayey muhiim u tahay in annaga, suuqleyda ahaan, aan ka hor tagno eexdeenna dabiiciga ah ama meelaha raaxada oo aan ku dadaalno dadaalkeenna saxda ah si aan u tijaabino xaalad kasta.
Isbuucaan, Gaaritaanka sii daayay wareysi ay ila yeesheen Macluumaad weyn iyo suuqgeynta waana mowduuc aan aad u xiiseynayo. Xogta Weyn, suuqleyda waxaa lagu soo bandhigi karaa xogta waqtiga-dhabta ah oo leh 4's mugga, kala duwanaanta, xawaaraha iyo run ahaanta. Ma jiraan wax sabab ah oo ay u hayaan suuqleyda ilaha dhaqaale si ay u tijaabiyaan una cabbiraan kasta isdhexgalka maalmahan.
Bayaanka waxaan jeclaan lahaa inay suuqyadu joojiyaan inay dhahaan waa,
Waan isku daynay taas mana shaqeyn.
Waxaan su'aal ka qabaa qeexitaankooda isku dayay iyo waliba su’aashooda ah ma shaqeyn. Waxaan leenahay hal rajo, tusaale ahaan, oo sheegay inaysan sameynin SEO maxaa yeelay dhammaan rajadooda waxay ka yimaadeen Facebook. Waxaan weydiiyay halka ay dhigayaan miisaaniyadooda oo dhan… layaab malahan waxay ku jirtay Facebook. Hagaag, taasi micnaheedu maahan in raadinta dabiici ah aysan shaqeyn, waxay kaliya ka dhigan tahay in kheyraadka aan loo adeegsan si dhab ah loo tijaabiyo loona arko haddii ay jiraan ROI togan. Taasi waa farqi weyn.
Bayaankaas waxaa barbar socda kuwo kale:
Waxaan ku helnaa dhammaan ganacsigeenna gudbinta iyo ereyga afka.
Warbaahinta bulshada ma shaqeyso.
Ma lihin waqti aan ku horumarinno waxyaabaha ku jira.
Wax yar oo baadhitaan ah oo tan ku saabsan ayaa sida caadiga ah ka helaya goobta oo aan laga helin raadinta, istiraatiijiyado nuxur la'aan ah, macluumaadka xiriirka oo maqan ama foom aan shaqaynayn oo ku yaal bogga internetka, ma jiro barnaamij suuqgeyn email ah…. sidoo kale layaab malahan ganacsigaaga oo dhan wuxuu ku yimaadaa tixraac iyo hadal afka ah! Ma jirto waddo kale oo dhab ahaan lagula macaamilo internetka!
Dhowr sano ka hor, waxaan ka caban lahaa in dhibaatada leh Analytics taasi waa inay caqli ahaan uun tahay sida isticmaalehu khibrad iyo xeel dheer u leeyahay u adeegsiga. Samee warbixin adigoon qod qodneyn, waxaadna qaadan kartaa go'aanno cabsi leh adoo adeegsanaya Analytics. Qaadashada go'aano adag waxay u baahan tahay fulin adag oo ah Analytics iyo qeexida xogta waxay u baahan tahay khibrad. Falanqaynta ayaa aalad fiican u ah weydiisanaya su'aalo, laakiin aalad aad u xun oo loogu talagalay helitaanka jawaabo.
Macluumaad Weyn, Aaladaha Maareynta Macluumaadka, Dashboodyada, iyo qalab kale ayaa runtii ku soo socda safka hore. Gaaritaanka wuxuu saxayaa dhibaatooyinka tayada xogta ururada iyadoo la nadiifinayo xogtooda - de-duping, jaangoynta, hagaajinta, hagaajinta iyo xaqiijinta - si otomaatig ah oo joogto ah. Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ku bilowdo si wax ku ool ah u cabbiraadda iyo fulinta ololayaasha suuqgeynta ugu fiican ayaa hadda la heli karaa.
Shirkad xiise badan oo aan dhowaan la kulmay waxay ahayd Aragtida dadka - kuwaas oo qiimeynaya maaliyad shirkadeed dhan oo ka dhan ah waxyaabaha sida dadaalkooda suuq geynta si ay u arkaan sida ay u muujinayaan marka la barbardhigo tartankooda iyo warshadaha. Qiyaas inaad awoodo inaad tustid guddigaaga in kharashka suuqgeyntaadu uu ka hooseeyo celceliska ama kharashka aad ku bixisid hoggaankaaga iyo kobacaagu ay ka badan yihiin warshadaha! Xalalkan ayaa hada inoo diyaar ah.
Waxa aan la heli karin, in kastoo, ay tahay hibada iyo agabyada looga faa'iideysan karo tikniyoolajiyadda.
Kartida ayaa ka adag helitaankeeda marka loo eego qalabka. Haysashada falanqeeyayaasha suuq-geynta ee awooda inay si sax ah u tijaabiyaan, u cabbiraan una sameeyaan fikradaha ayaa ka sii adkaanaya sidii hore. Wareysiga ReachForce
Waxaan la shaqeyneynaa shirkadaha latalinta sida Faaruuq, kuwaas oo horumarinaya moodello layaableh oo sax ah oo loogu talagalay falanqaynta saadaalinta ee suuqyayaashu awood u yeelan doonaan inay u adeegsadaan si ay si fiican ugu fahmaan kharashka iskutallaabtiisa si ay u arkaan sida isbeddelada maalgashiga suuqgooda ay saameyn ugu yeelan doonaan natiijooyinka si sax ah oo la yaab leh.
Tiro shirkado ah oo cabsi leh oo aan wareysaneyno oo aan la shaqeyneyno ma cabbirayaan, bedelkeedana, wali waxay suuq ka soo baxayaan sinta. Kuwani maahan Hooyo & Boodhadh… qaar iyaga ka mid ah waa Fortune 500 shirkadood. Waxay ka fogaadaan nidaamyada cabbiraadda la caddeeyey iyo hoos u dhigista nidaamyada hagaajinaya go'aannada suuqgeynta maxaa yeelay isla nidaamyadaas ayaa sidoo kale bixiya cabbiraad xisaabeed muuqda. Iyagu waa nooca maamulka ee nitpick ku saabsan sida wax u egyihiin ama u dhawaqayaan, iyagoo si isdaba joog ah u daahinaya fulinta istiraatiijiyadda iyo cabirka saameynta maxaa yeelay ma hayaan wax tilmaam ah sida ay wax u qaban doonto.
Suuq galiyeyaal ahaan, sifiican ayaan u sameyn karnaa. Waa inaan sifiican usameynaa. Qalabka ayaa jira!
Tags: xog weynsuuqgeynta kanaalkanadaafada xogtadhufto ee maareynta xogtadmpsirdoonka is-dhexgalkasuuqyadacudurdaar suuqgeyntaaragtidafooshagaadhooo wuxuu ku yidhi
AAMIIN! Nasiib darro waxan maqlaa markasta. “Waxaan isku daynay taas 10 sano ka hor mana aysan shaqeyn.” Waxaan ka maqlaa inta badan dadka ka shaqeeya shirkaddan 15 + sano. Sideen dadka ugu heli karnaa inay horay u fiiriyaan oo aysan dib u dhicin? Mise ku kalsoon tahay in fikradaha cusubi ay fikrad hore u rogi karaan feker wanaagsan?
“Wallee layaab malahan in ganacsigaaga oo dhan uu ku yimaado tixraac iyo hadal afka ah! Ma jirto waddo kale oo aad si dhab ah ganacsi ugaga ganacsato khadka tooska ah! ”
Tani! Tani! Milyan jeer tan!
Waxaan maqli jiray hawlwadeeno aan la tirin karin oo igu qanciya khadadka ku saabsan sida “taasi maahan sida ay uga shaqeyso warshadeena. 98% ganacsigeenu wuxuu ka yimaadaa wicitaan qabow. ”
Haa… Markaad u qoondeyso 98% miisaaniyaddaada hoggaanka xarun wacitaan, taasi waxay u egtahay inay dhacdo.
Doug - Miyaad tixgelisay inaad sameyso koorso aasaasi ah oo ku saabsan sida internetku ganacsiga u horseedo? Tirada dadka fuliya ee aan fahmin aasaasiga, waxaan u maleynayaa inaad dil sameyn laheyd! 🙂
Jan 31, 2018 saacadu markay ahayd 5:17 PM
Maqaalkani wuxuu ku xirayaa Interactive Intelligence, oo ay iibsatay Genesys bishii Diseembar 2016. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan iibsigan, fadlan booqo: https://www.genesys.com/inin